Haweeney Sun cabtay oo la dhigay Isbitaal ku yaalla magaalada Guriceel iyo xaaladeeda oo... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Haweeney Sun cabtay oo la dhigay Isbitaal ku yaalla magaalada Guriceel iyo xaaladeeda oo…
Wararka laga helayo magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in qof haween ah goor dhoweyd la dhigay Isbitaal ku yaalla magaaladaasi.
Gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Naleey Cusmaan ayaa saaka la dhigay Isbitaalka Fayo Care ee Guriceel, waxayna dadkii la socday sheegeen inay Sun cabtay si ay isu disho.
Lama oga sababta keenay inay gabadhan Sunta cabto, waxaana xaaladeed caafimaad lagula tacaalayaa Isbitaalka degaanka ee la geeyay, iyadoo wararku sheegayaan in xaaladeeda ay tahay mid culus.
Degaanada Galmudug ayaa waxaa muddooyinkii danbe kusoo batay dhaqannada noocaan oo kale ah ee dad u badan haween isku dayeen inay Sun isku dilaan arrimo kala duwan awgood, waana caadooyin laga soo min guuriyey aflaamta.
Previous articleRW Rooble oo ka hadlay Jadwalka cusub ee kasoo baxay Guddiga Doorashada Federaalka
Next articleXajkii 2-aad ee ugu dadka yaraa oo Berri bilaabanaya iyo Shuruudaha adag ee Sacuudiga kusoo rogay (Warbixin)